१० अर्ब स्वाहा ! तर बढेकोबढ्यै छ कोरोनाको जोखिम - Sawal Nepal
डा. रवीन्द्र पाण्डे (जनस्वास्थ्य विज्ञ) २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार २२:४५
डा. रवीन्द्र पाण्डे/ जीवन भागदौडमा चलिरहेको थियो । पूँजीवादले हामीलाई यसरी कजाएको थियो कि; भोक, निद्रा, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आराम, आत्मचिन्तनलगायत जीवनका विविध पाटा बिर्सेर हामीहरू मृगतृष्णाको यात्रामा फर्किन नमिल्ने दुरीतर्फ अग्रसर थियौं । हाम्रा तृष्णा र महत्त्वाकांक्षाका उचाइ दिन प्रतिदिन अग्लिरहेका थिए । जीवनका शितलता हिउँ जसरी पग्लिरहेका थिए । सफलतामा सन्तुष्टि थिएन, असन्तुष्टि मात्र थियो । आर्जन गरेका पैसा, सुन, जग्गा, घर, शेयर, व्यवसाय आदिले नपुगेर हामीहरू आकुलब्याकुल भइरहेका थियौं । भोगको तृष्णामा हाम्रा ओठ सधैँ सुकेका थिए, हाम्रा नजर सधैँ झुकेका थिए ।
यो १५ दिनमा झन्डै २ लाख नेपाली भारतबाट नेपाल आए । उताको असुरक्षित यात्रा, यताको परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनको बिजोगका कारण संक्रमणमा रासायनिक मल हाल्ने काम भयो । अध्ययनबाट भन्न सकिन्छ, नेपालमा भर्खर कोरोना संक्रमणको आउटब्रेक भएको छ । दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय दिनप्रतिदिन निरीह बन्दैछ ।
त्यो सहयोग सरकारको थाक्रो चढेर थाक्रोलाई खोक्रो बनाउनेविरुद्ध हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका हरेक व्यक्तिको चेकजाँच गरियोस्, कात्रोमा कसले कतिवटा खल्ती सिलाएको छ भनेर ! लोकान्तर बाट साभार